အကြွေးဝယ်ကတ်များနှင့်ချေးငွေများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပါ | USAHello | USAHello
သငျသညျပိုက်ဆံချေးဖို့လိုအပျပါနဲ့? ခရက်ဒစ်နှင့်ငွေထုတ်ချေးပိုက်ဆံချေးဖို့နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. ငွေချေး၏အချို့မျိုးအခြားသူများထက်ပိုမိုလုံခြုံများမှာ. အကြွေးဝယ်ကတ်များအကြောင်းကိုလေ့လာပါ, payday ချေးငွေများနှင့်ငွေချေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ.
Haelliott / Wikimedia Commons ဓာတ်ပုံယဉျကြေး
သငျသညျငွေသားသုံးမယ့်အစားအရာများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်. တစ်ဦး store မှာဆပ်ဖို့, သင်တစ်ဦးစက်အတွက်သေးငယ်တဲ့ပလပ်စတစ်ကဒ်ထား. ဖုန်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းကျော်, သငျသညျကဒ်နံပါတ်နှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ်ပြောနိုင်.
ခရက်ဒစ်ကတ်များဥပဒေကြမ်းများစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ပေးဆောင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာ. ဒါပေမဲ့သူတို့ကအန္တရာယ်များရှိ. သငျသညျတိုင်းလခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုပြန်မဆပ်ဘူးဆိုရင်, သငျသညျအတိုးပေးဆပ်ပါလိမ့်မယ်. သင်စိတ်ဝင်စားချေးသောအရာကိုထိပ်ပေါ်တွင်သင်ပေးဆောင်ပမာဏဖြစ်ပါသည်. ကြာကြာသင်ပေးဆောင်ကြဘူး, သငျသညျကြွေးပိုမိုစိတ်ဝင်စားကြောင်း. အမေရိကရှိလူများ၏အဖြေတွေအများကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြွေးကဒ်ကြီးတွေအကြွေးတွေရှိတယ်.
သငျသညျကွောငျ့, ကြွေးမြီစရတဲ့၏အန္တရာယ်ကိုတစ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုချင်တယ်မပြုစေခြင်းငှါ. ဒါပေမယ့်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်: သင့်ရဲ့အကြွေးသမိုင်းကိုစတင်ရန်. သင့်ရဲ့အကြွေးသမိုင်းသင်ချေးနှင့်မည်သို့ကောင်းစွာသင်ပြန်ပေးဆောင်ခဲ့ကြရာ၏စံချိန်တင်ဖြစ်ပါသည်. A ကောင်းဆုံးအကြွေးသမိုင်းအကြွေးတည်ဆောက်ရန်ကူညီပေးသည်. သငျသညျခရက်ဒစ်တည်ဆောက်လိုလျှင်, သငျသညျကြီးမားသောအရာများအတွက်လိုအပ်တဲ့အခါသင်ပိုက်ဆံချေးနိုင်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောကားတစ်စီးသို့မဟုတ်တစ်အိမ်မှာဝယ်ယူအဖြစ်.
သင်တစ်ဦးလုံခြုံခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်. ခြေတံရှည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ချေးငွေတည်ဆောက်ရန်ရုန်းကန်တဲ့သူကအခြားလူတွေကိုလုံခြုံအကြွေးကဒ်များကိုကမ်းလှမ်း. သငျသညျပြီးသားငွေကိုပေးပွီလုံခြုံအကြွေးကတ်များကယ့်ကိုအကြွေးမဟုတျပါ, သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်တို့အဘို့အဆပ်ဖို့ကတိပြုထားသည်. ဒါပေမဲ့သူတို့ကသငျသညျကောငျးမှအကြွေးတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုပါဘူး. ဘဏ်များနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်အကြွေးကဒ်များကိုလုံခြုံပါပြီ, လွန်း. ခြေတံရှည်အောက်ပိုင်းအတိုးနှုန်းများနှင့်အခြားကုမ္ပဏီများထက်လျှောက်ထားရန်ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိပါတယ်. ဒီတော့အကြွေးသမဂ္ဂများပြုပါ.
credit သမဂ္ဂများဘဏ်များကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူအောင်မြင်ရေးအတွက်ကူညီဖို့ရန်ကြိုးစား. အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူအားလုံးအတူတကွအကြွေးပြည်ထောင်စုပိုင်ဆိုင်. ပိုက်ဆံချေးသို့မဟုတ်အနိမ့်ဝင်ငွေနှင့်မျှမကရက်ဒစ်သမိုင်းနှင့်အတူလူတို့နှင့်အတူလူများတို့အားအကြွေးကဒ်များကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ချေးငွေသမဂ္ဂများအကူအညီနဲ့. သူတို့သည်သင့်ပိုက်ဆံကယ်တင်ကူညီကြမည်, လွန်း. သင်လုပ်နိုင်သည် သငျသညျအနီးခရက်ဒစ်ပြည်ထောင်စုကိုရှာဖွေ
သငျသညျရနိုင်ချေးငွေအများအပြားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. တချို့ကရေတိုရေရှည်အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်များမှာ, အခြားသူများကိုရေရှည်အခြေအနေများအဘို့အကြာကြီးနေ, အိမ်တအိမ်ဝယ်ယူနဲ့တူ.
Payday ချေးငွေလျင်မြန်စွာငွေလိုအပ်သူကိုလူတို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏. လူတွေကသူတို့ပေးဆောင်ရနေ့၌ပြန်ဆပ်ဖို့တစ်ဦးပေးသောသူထံမှပိုက်ဆံချေး. သို့သော် payday ချေးငွေများကိုမကြာခဏသင်နှင့်အတူ start ထက်ပိုမိုလေးနက်သောပိုက်ဆံပြဿနာများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ. တစ်ဦး payday ချေးငွေရယူခြင်းကိုသင်ပြီးသားသင်၏နောက်လစာသည်အထိမှတဆင့်အရနည်းသောပိုက်ဆံရှိဆိုလိုတယ်. လည်း, payday ငွေချေးအကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးကိုအားသွင်း. ဒါကြောင့်သင်ပြန်သင်ချေးထက်အများကြီးပိုပေးဆောင်. တဖန်သင်တို့အချိန်ပေါ်ပြန်မဆပ်ကြပါလျှင်, သငျသညျ ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားမှုပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်.
Payday အခြားရွေးချယ်စရာချေးငွေထုတ်ပေးရန် (PAL)
credit သမဂ္ဂများသင်တစ်ဦး payday ချေးငွေထက်အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ရွေးချယ်မှုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ: တစ်ဦး payday အခြားရွေးချယ်စရာချေးငွေ (PAL). သင်တစ်ဦး payday ချေးငွေရရှိရန်ရန်မလိုပါဒါတစ်ဦးက PAL တစ်ရေတိုရေရှည်ချေးငွေဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအထိချေးနိုင်ပါတယ် $1,000 သူတို့သိပ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုအားသွင်းမည်မဟုတ်. သင်တစ်ဦး PAL ထဲကယူနိုင်ခင်သင်ကတစ်လများအတွက်အကြွေးပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရန်ရှိသည်.
ပေါင်ကလူတအိမ်ဝယ်ဖို့ get ချေးငွေများဖြစ်ကြောင်း. လစဉ်လတိုင်းအောင်ကြီးမားတဲ့ငွေပေးချေရှိပါတယ်. သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကငှားပေးဆောင်ထက်မပို, နှင့်အဆုံးမှာ, သင်သည်သင်၏နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်! ဒါဟာပေါင်ရရှိရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အကြွေးပြည်ထောင်စုသင်ကူညီစေခြင်းငှါ. ပေါင်အကြောင်းကို Read မဟုတ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအဘို့. အဆိုပါဖက်ဒရယ်အိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောချေးငွေများအကြောင်းကိုသွန်သင်နှင့်မည်သို့အသစ်ရဲ့အိမ်မှာအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့သငျသညျသငျပေးနိုငျ.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားအများအပြားအစီအစဉ်များကိုဒုက္ခသည်နှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်ပါကကူညီ. သူတို့ကချေးငွေနှင့်အခြားကူညီပံ့ပိုးပေး, ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြံဉာဏ်နှင့်ပိုက်ဆံအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်. ဤတွင်သူတို့ထဲကအချို့:
Sacramento အတွက်, , CA - တံခါးပေါက်ဖွင့်လှစ်
New Hampshire အတွက် - နယူးဟမ်းရှားနယူးအမေရိကန်တွေချေးငွေရန်ပုံငွေအဖွဲ့
နယူးယောက်စီးတီးရှိ - နယူးအမေရိကန်များအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရေးစင်တာ
ဝါရှင်တန်ရှိ, DC က, နှင့်ဘော်လ်တီမိုး - လက်တင်စီးပွားရေးဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန
အတ္တလန်တာအတွက်, ဂျော်ဂျီယာ - ယင်းထဘဏ္ဍာရေးရေးစင်တာတွင်
ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ (CDFIs) အကြွေးသမဂ္ဂများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကနေအမြတ်အစွန်းရစေချင်ကြပါဘူး. အစား, သူတို့ကလူအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးလို. CDFIs အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှပိုက်ဆံချေး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်, နှင့်တတ်နိုင် homes.You တည်ဆောက်ရန်နိုင်ပါတယ် သငျသညျအနီး CDFI ရှာတွေ့.